» धेरै कलाकारको छायाङ्कन गरिएको गीत “मायाको हाटबजार” चाँडै बजारमा आउँदै
धेरै कलाकारको छायाङ्कन गरिएको गीत “मायाको हाटबजार” चाँडै बजारमा आउँदै
२०७५ फाल्गुन २६,आईतवार १७:१२
मकवानपुर, २६ फागुन । त्यसो त हेटौँडामा अहिले राष्ट्रिय ब्यापार मेलाको निकै ठुलो बजार लागेको छ । तर मकवानपुरे कलाकर्मी, चलचित्रका निर्मता राजेन्द्र गौतमले संभवत नेपालकै सबैभन्दा धेरै कलाकार प्रयोग गर्दै “मायाको हाटबजार” समेत लगाएका छन् ।
उनको “मायाको हाटबजार” भने किनबेच गर्ने भने हैन । गौतमले आफ्नो गित “मायाको हाटबजार” को छायाङ्कन गर्दा हाटबजारनै लगाए । नेपालकै सबैभन्दा धेरै कलाकार प्रयोग गरिएर छायाङ्कन गरिएको गीत “मायाको हाटबजार” अबँ चाँडै बजारमा आउँदै छ ।
गीतलाई १२ लाख रुपैँया लागत लगाएर छायाङ्न गरिएको गौतमले बताए । गितको लागि हेलिकप्टरकोसमेत प्रयोग गरिएको छ । शब्द तथा गायन गौतमकै रहेको गीतमा राम विडारीको संगित रहेको छ भने म्युजिक भिडियोमा आशिस/अनुप मानन्धरको कोरियोग्राफी हेर्न पाईन्छ ।
गीतमा सुरज योञ्जन र मोनिका लामिछानेको मुख्य अभिनय रहेको छ भने यसलाई गौतम तथा शितल शर्माले निर्माण गरेका हुन् । गितको ब्यवस्थापन कृष्णकली राजथलाले गरेकी छिन् भने विनोद भट्राईले भिडियो खिचेका हुन् ।
गितको विषयमा जानकारी दिँदै गायक तथा निर्मता गौतमले आफुले हेटौँडाबाट पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै कोरसको प्रयोग गरि गित निर्माण गरेको बताए । गित अबको केहि समयमानै युटुव मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
नेपालमा म्युजिक भिडियो निर्माणमा धेरै परिश्रम नगर्ने गरेको सन्र्दभमा आफुहरले निकै मेहनत तथा श्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गरेर गितको तयारी पुरा गरेको बताए ।
हेटौँडामा बिहानै भयो लफडाः उद्योगी खोल्ने, प्रहरी बन्द गराउने (भिडियो सहित)
कोरोना नियन्त्रण गर्न एक लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन
पाकिस्तानमा कोरोनाका कारण एक मन्त्रीको मृत्यु
मुटुको औषधि नपाएर क्वारेन्टाइनमै मृत्यु
विदेशबाट फर्कने नेपाली राख्न उपत्यकाको तीन जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर, बागमती प्रदेशका कहाँ राख्ने ?
हेर्नुहोस् आज २१ जेठ २०७७ बुधवारको राशिफल
कसलाई बौद्धिक मान्ने ?
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बजार संचालनमा ल्याउने निर्णय